आज क्षुद्रग्रह पृथ्वी नजिकै आउँदैछ, के हामी सुरक्षित छौँ ? – EST Nepal
आज क्षुद्रग्रह पृथ्वी नजिकै आउँदैछ, के हामी सुरक्षित छौँ ?
estnepal १७ बैशाख २०७७, बुधबार १२:३२
विराटनगर । अहिले विश्व त्यसै पनि आक्रान्त छ- कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) काे महामारीले। यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि यतिबेला विश्वका मुलुक संघर्ष गरिरहेका छन्। कतै स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरिएको छ त कतै लकडाउन। एकप्रकारले अहिले विश्व नै आतंकित छ।
यहीबीच अर्काे एउटा डरलाग्दो हल्लाले विश्वमा थप आतंक सिर्जना गरिरहेकाे छ। त्याे हाे- बुधबार (अप्रिल २९) १९९८ ओआर-२ नामक क्षुद्रग्रह पृथ्वीको नजिकै आउँदै छ!
त्यसैले यो पृथ्वीनजिक आउँदा पृथ्वी–चन्द्रमाको दूरीभन्दा कम्तीमा १६ गुणा टाढा रहनेछ भने करिब २ किलोमिटर आकारको रहेकाले साथै यसको औसत अपेरेन्ट म्याग्निच्युड करिब ११ रहेकाले यसलाई नांगो आँखाले देख्न सकिँदैन। यो देखिन ठूलै खालको टेलिस्कोप चाहिन्छ। Nepalkhabar
ताप्लेजुङका हाटबजारमा मौलायो तरुलको व्यापार
२८ पुष २०७६, सोमबार १८:५७
सरकारी निर्माणमा जग्गा परे ७५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति
४ पुष २०७६, शुक्रबार ०७:१०
मन्त्रिपरिषद् बैठक आज, वैशाख १० सम्म लकडाउन लम्ब्याउने तयारी
२ बैशाख २०७७, मंगलवार ०६:४६
निजी विद्यालय सञ्चालनको समय सर्न सक्ने
३ चैत्र २०७६, सोमबार ०७:४४
१ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १३:३२
विश्वमा कोरोना : एक लाख ६० हजार बढीको मृत्यु